Jawaabta Wasiir Sacad ka bixiyey Shirkadda SIC ma tahay mid lagu qanci karo?
Wasiirka Arrimaha dibada Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa sharaxaad ka bixiyey cida iska leh Shirkadda SIC oo lagu xidhiidhiyey inay leeyihiin isaga iyo Ambasador Baashe Cumar oo ah Wakiilka Somaliland ee dalka Imaraadka Carabta.
Dr. Sacad ayaa sheegay inay Shirkadaas leedahay Dawladda Somaliland, balse ay magac ahaan ku diwaan-gashan yihiin isaga iyo Ambasador Baashe Cawil.
Dood ayaa ka dhalatay markii ay dibada u soo baxday Sheekada Shirkadan oo aan hore xog looga haynin, isla markaana aan aasaaskeeda iyo cidda leh midkoodna aanay Golaha Xeer-dejintu u soo qaadin.
Sheekada Shirkadan marna lama horkeenin Golaha Wakiillada oo ay ahayd in laga ansixiyo aasaaska Shirkadaas iyo kuwo kale oo la mid ah hadday dawladdu dhisayso, kaddibna la hello qaab Sharci iyo nidaam maamul oo lagu jaan-goynayo sifaha ay Dawladdu u isticmaalayso, Dhaqaalaha Dalka ka soo gelaya iyo qaabka loo maamulayo.
Sidoo kale, marna laguma arag meelaha laga eeggo Dhaqaalaha Dawladda lacagta la geliyey Shirkadaas iyo qadarka ay leegtahay, sidoo kalena Wasiirka iyo Xukuumaddii hore midna hadda ka hor may soo qaadin war la xidhiidha arrintaas.
Balse shakiga ah inay masuuliyiin ka tirsan Xukuumaddihii hore Saamiyo Ganacsi iyo Shirkaddo ay leeyihiin uga faa’idaysteen xilalka ay hayeen waa mid dadka qaar qabeen, kuwana ogaayeen oo aan madmadow kaga jirin.
Doodda iminka Wasiirku kaga jawaabay Su’aallaha laga waydiiyey arrinta Shirkaddan, maha mid Qaranka u damaanad qaadaysa hantida kaga maqan Shirkadaas, waxaanay arrintu iminka u taallaa Golaha Wakiillada oo ay tahay inay deg deg ugu yeedhaan Wasiirka iyo masuuliyiinta kale ee kula jirta mashruucaas, si ay xog dhamaystiran iyo macluumaad sharci oo tix-raac leh uga helaan.
Sidoo kale, waxa Hay’adda Dawladda ee Ilaalinta Hantida Qaranka, sida Hanti-dhowraha guud looga baahan yahay inay daba-gal ku sameeyaan Hantida xubno kamid ahaa Xukuumaddii hore oo la aaminsan yahay inay Shirkaddo ganacsi ku samaysteen Maaliyad Dawladdu leedahay ama xilalka ay hayeen ku qaatay Qandaraasyo Mashaariiceed.
Previous: Guddida Ilaalinta Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada oo shaaciyey Qorsheyaal cusub
Next: Somaliland :Dawladda oo xaqiijisay Ugaadhsiga Diinka